Loza faharoa no namely an'i Maorisy taorian'ny naharesy ny COVID-19
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Loza faharoa no namely an'i Maorisy taorian'ny naharesy ny COVID-19
Lozam-pifamoivoizana goavana no miseho ao amin'ny Repoblikan'ny Ranomasimbe Indianina Maurice. Vao nandresy an'i Coronavirus ity firenena ity, ary ny fanamby ara-tontolo iainana dia mety hamerina ny firenena nosy. Ny mpamaky eTN Ibrahim dia miara-miasa amin'ny SKAL Mauritius amin'ny valinteny avy amin'ny indostrian'ny fizahantany Maorisy.
The MV Wakashio fivarotana solika nitranga tany ivelany Pointe d'Esny, atsimon'i Maorisy nanomboka ny 25 Jolay 2020 tokony ho tamin'ny 16:00 UTC, rehefa MV Wakashio, mpitatitra vaventy an'ny orinasa japoney iray, saingy nanidina teo ambanin'ny sainam-pirenen'i Panameana izy, dia nidona tamin'ny morontsiraka atsimon'ny nosy Mauritius, amin'ny mpandrindra tombanana 20.4402 ° S 57.7444 ° E
Ny lozam-pifamoivoizana dia niteraka ny fiparitahan'ny tsikelikely ny ampahany tamin'ny lasantsy 4,000 taonina sy solika entin'ny sambo. Ny manampahefana Maorisy dia niezaka nifehy ny fandrobana sy nanalefaka ny vokany, nanokana ireo faritra saro-pady teny amoron-dranomasina izay misy tahirin-javaboahary biby sy zavamaniry an-dranomasina, eo am-piandrasana fanampiana avy any ivelany mba hahatratra ny fitrandrahana ny sambo manodidina ny 3,890 taonina tombanana ho sisa tavela asio takelaka, ary sivanio amin'ireo vakivaky ilay vatan-kazo.
Ny minisitry ny tontolo iainana Kavy Ramano nosy sy ny minisitry ny jono dia nilaza tamin'ny mpanao gazety fa sambany no niatrika loza toy izao ny firenena ary tsy ampy fitaovana izy ireo hiatrehana ny olana.
Nanomboka namoaka solika an-taonina any amin'ny rano manodidina ilay mpitatitra vaventy. Ny praiminisitra Maorisy Pravind Jugnauth dia nanambara ny vonjy taitra tamin'ny zoma lasa teo.
Nilaza izy fa tsy nanana “ny fahaiza-manao sy ny fahaiza-manao hamahana ny sambo tranainy” ity firenena ity rehefa niantso vonjy tamin'i France izy.
Ny nosy frantsay La Réunion dia akaikin'i Maorisy any amin'ny Ranomasimbe Indianina. Ny nosy roa dia ao amin'ny vondrona Vanilla Islands. Miorina amin'ireo haran-dranomasina malaza eran-tany i Maorisy, ary ampahany lehibe amin'ny toekarem-pirenena ny fizahantany. "Rehefa tandindomin-doza ny biodiversity dia maika ny hanao zavatra," hoy ny tweet nataon'ny filoha frantsay Emmanuel Macron tamin'ny sabotsy.
“Eo i Frantsa. Miaraka amin'ny mponin'i Maorisy. Azonao atao ny miantehitra amin'ny fanohananay Jugnauth malala. ”
Nanamafy ny masoivoho frantsay any Maurice fa misy fiaramanidina miaramila avy any La Réunion hitondra fitaovana fanaraha-maso ny fandotoana any Maorisy.
Nilaza i Happy Khambule avy ao Greenpeace Africa fa karazan-biby “an'arivony” no “atahorana ho rendrika ao anaty ranomasina mandoto, misy vokany ratsy eo amin'ny toekaren'i Maorisy, ny fahasalamana ara-tsakafo ary ny indostrian'ny fizahantany sy fizahan-tany.
Ny sambo - fananan'ny orinasa japoney iray nefa nisoratra anarana tany panamà - dia foana rehefa niditra an-tanety izy, nefa nanana solika 4,000 taonina teo amboniny.
Ao amin'ny Pointe d'Esny, amina faritra mando akaikin'ny valan-dranomasina ny MV Wakashio.
Tao anatin'ny fanambarana iray, ny tompon'ilay sambo, Nagashiki Shipping, dia nilaza fa “noho ny toetr'andro ratsy sy ny fikoropahana tsy tapaka tato anatin'ny andro vitsivitsy dia vaky ny tanky bunker an-tsokosoko ary tafaporitsaka ao anaty ranomasina ny solika. ".
Nanashiki Shipping nanampy fa mandray andraikitra lehibe amin'ny tontolo iainana ary hanao ny ezaka rehetra miaraka amin'ireo masoivoho mpiara-miasa sy mpiantoka mba hiarovana ny tontolo iainana an-dranomasina sy hisorohana ny fandotoana bebe kokoa.
Nanokatra famotopotorana momba ny fandatsahana ny polisy Maurice.
Cuthbert Ncube, filohan'ny Birao fizahantany afrikanina nanolotra fanampiana amin'ny fiaraha-miasa amin'i Maorisy.